dhiri: ese apuro wachi nike + akateedzana 3 mamodheru izvozvi 20% yabviswa
Kuru Nhau & Ongororo Deal: Yese Apple Tarisa Nike + Series 3 mamodheru izvozvi 20% yabviswa
Pamberi peApple & apos; s Gunyana 12 chiziviso kwatinotarisira kuti iPhones nyowani nePads zvibudiswe pachena, mafeni ari kutsvaga smartwatch anofanirwa kutenga yakasarudzika Nhepfenyuro dzeApple 3 zvakachipa pane usuak.
Nike kazhinji inotengesa kutengesa pane yayo Apple Watch Series 3 mamodheru, asi isu kashoma kuti tiwane misiyano yese yakadzikiswa. Kwechinguva chidiki, ese maApple Watch Nike + Series 3 mamodheru ari 20% anodhura paNike & apos; online chitoro. Kuti uwane iyo 20% dhisikaundi, vatengi vanofanirwa kunyorera iyoAPPLE20promo kodhi panguva yekubuda.
Yakachipa pashiri Apple Tarisa Nike + Series 3 smartwatch, mushure mekushandisa iyo 20% dhisikaundi, inodhura madhora mazana maviri nemakumi mairi nemashanu, nepo iyo yakanyanya kudhura iri $ 345.
Ramba uchifunga kuti hapana misiyano yemahara pakati peApple Watch Nike + Series 3 uye yakajairwa modhi, asi iyo yekutanga inouya neNike Band, yakasarudzika Nike zviso zvekutarisa, uye kubatana kwepedyo ne Nike + Run kirabhu app . Zvakare, iyo Nike + mamodheru anongowanikwa mune aluminium kesi shanduro, ine Ion-X girazi.
mabviro: Nike kuburikidza 9to5toys
yakanakisa mmo mitambo ye iphone
mitambo yemitambo yakanakisa ye iphone
oneplus 9 pro kuburitsa zuva
Moto Z Tamba uchitaridzika unomhanya Android 8.0 (Oreo); kugadzirisa kuri kuuya munguva pfupi?
Yahoo Mail isiri kushandira vazhinji paIOS, asi kugadzirisa kuri mumabasa
Poll: Ndeapi & apos; s akanakisa iPhone enguva dzese? Tinoziva mhinduro!
Mamwe maMicrosoft Surface Pro 3 mamodheru izvozvi ave $ 150 yakachipa muUS
SanDisk flash drive inoshandisa yako Android foni kana piritsi & apos; s Micro-USB chiteshi kuendesa mafaira
Maitiro ekubvisa Chrome tabo kubva kune yako yazvino maapplication runyorwa (Android 5.0 Lollipop gwara)
AT & T inoenda kuVerizon & apos; s jugular ine hombe 5G kusimudzira ichizarura zvine mwero 2021 kuburitsa zvirongwa
Deal: Apple iPad Mini 4 Wi-Fi 128GB iri 25% kubviswa paKutenga Kwakanyanya
Maitiro ekumanikidza kutangazve / reboot iyo iPhone 7 uye 7 Plus ikozvino sezvo pasina epanyama kiyi yekumba